Kulan balaadhan oo lagaga hadlaayay arimaha naafada Somaliland oo ka dhacay magaalada London…June 12.18 : Salaan Media
Kulan balaadhan oo lagaga hadlaayay arimaha naafada Somaliland oo ka dhacay magaalada London…June 12.18
Taarikhdu markay ahay 09/06/2018 Waxaa galbeedka magaalada London ka dhacay shir weyn oo uu hagaayay la taliyaha madaxwaynaha ee arrimaha naafada Mr Abdirahman Hussein Abdi . Bulsha weynta ka soo qayb gashay ayaa ku hanbalyeeye Madaxweyne Musse Bixi xilkaa Naafada ee u magacaabay Abdirahmaan Houssein.
Kulanka waxaa kasoo qayb-galay xubno badan oo ka shaqeeya hay’adaha caafimaadka ee loo yaqaan NHS ee UK. Xubnahaaa oo ku balan qaaday inay la shaqayn doonaan uguna deeqi dooan wixii qalabba ee ay hayaan iyo qoraalba ah. Safiirka Somaliland ee uk oo halkaa ka jeediyay hadal qiimo weyn ku fadhiya ayaa ku tiiqtiigsaday fa’aiidada ku jirta iyo ahmiyada weyn ee nafadu ku leedahay wadanka haddii la caawiyo oo meel qudha looga soo jeedsado.
Aduunyada maalin kaliya wax lama wada qabto, wadanka ingriiska oo mudo dheer jiray xeerkiisa naafada waxaa barlamaanku ingriisku ogolaaday 19995 ayuu yidhi lataliye Abdrahman Houseein abdi waxa kaluu raaciyay , Waa inaan dhisnaa biriijkii isku xidhaayay naafadda iyo dawladda. Gabagabadii shirkaasi wuxuu ku dhamaaday guul iyo jaaliyada oo u riyaaqday qorsha yaasha lataliyaha Madaxweynaha.
« Daawo:Mareeyaha Haayada Asarda Yasin Qalinle Ayaa Ka Hadlay Samaynta Balaadhan Ee Bulshada Ku Leedahay wado Xumada Siweyna Uga Dardaar Weriyey Xaalufinta Dhirta Lagu Hayo…June12.18
Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay Danjire Nicolas Nihon (Daawo Sawirro)…June 12.18 »